Home Wararka Maama Seynab oo Beesheeda U soo wada Saartay Xildhibaandooda iyo Kheyre oo...
Maama Saynab Cabdi Macalin oo u fulisay beesheeda ballanqaadkii ahaa inay u soo wada noqonayaan dhamaan xildhibaanadooda Senetka iyo Goalaha shacbiga markalaga reebo hal qof oo lasheegay inuu isku taagay iyada, welisa MOL ma helin magaciisa. Dhamaan xildhibaanada Beesha Murusade oo sidoo usoo wada noqonaya, dagaalkii isbadalkana banaanka ka ah. Goormaa u dmabeysay Dhegdheer iyo Maxamed Xaad oo qaylinaya. Waxay maamada u sheegtay inay xildhibaanadooda ay u soo wada celin doonto haddii ay Farmajo isu dulleeyaan waana ku qanceen.Ballanta maamada ayaa ahayd inay fuliso dhowr qodob beeshana ay fuliso dhowr qodob. Maamada waxaa laga rabay oo ay wada fulisay:
In Xildhibaanada Beesha ay soo wada noqdaan oo aan kuraastooda laga taaba.
In Faramjo ay ka dhaadhiciso inuu iska iska illoobo xurguftii kala dhaxeysay Kheyre oo isaga kheyre la heshiisiiyo, iyadoo kheyre la siinayo wixii Rooble la siiyey.
Beesha waxaa laga rabaa:
Inay ka shaqeeyaan inay kala jebiyaan mucaaridka iyagoo isticmaalaya magaca curadka Hawiye.
Inay beesha isku ballaariso degaanka Dayniile iyo dhulb boobka halkaas ka wadaan.
Inay joojiyaan dacaayadda iyo doodaha ay Faramjao kaga soo horjeedaan.
Arrimahaan waxaa horaba loo arkaa in Xil Xuseen Iidow oo shalay soo baxay uu sheegay inaysan beeshooda dagaal dambe kula jirin dowladda oo ay garab taagan tahay hiil iyo hooba oo ay ula shaqeyn doonto beesha sida ay ula shaqeeyaan Shabaabka. Hogaamiye Cali dheere oo shabaabka ka tirsanna ayaa loo sheego inuusan beesha dhibaato ku noqon, waxaana arrinkiisa kala soo hadli doona Xasan Kheyre Qatar.
Wiilkii isku qarxiyey Cabdicasiis Afrika wuxuu ahaa wiil adeer loo yahay ayuu hoosu sheegay Xil Xuseen Iidow. Waa dhab beeshu leedahay rag Sharaf badan laakiin waxay hadda beesha madaxyaweynteeda ay gacanta u gashay Farmajo oo xidid u ah oo hadda u beensheegaya si uu ugu gudbo xelligaan soona wada dhigi doona beesha oo dhan meeshii uu shalay Xasan Kheyre ku gowracay oo 7 daqiiqo kaga xayuubiyey kalsoonindii laakiin markaan ka darana ayuu sameyn doonaa oo waa xerxeri doonaa kuwa badan, qaarkoodna waa toogan doona si ay beelaha kale ugu quustaan haddii awooddaas inuu gaaro loo daayo oo aan maanta la hor qabateyn.
Xasan Cali Kheyre ayaa looga yeeray dalka Qatar oo dalkeenna dabka ku shidayey sannadahan dambe si:
Loo marsiiyo jidkii RW Rooble oo la agdhigay boorso ay lacagi ka buuxdo kadibna intuu kala batay saxeexay inuu ka amar qaadanayo Fahad iyo Farmajo. Kheyre jidkaas ayaa la marsiinayaa waana waddo qorsheysan
Xasan Kheyre loogu sheego inuu raaco Farmajo oo uu kala shaqeeyo sidii loo kala jebin lahaa midowga murashaxiinta oo uu awalba lug kula jiray lugta kalana ay Fahad u agtaallay.
Dhinac waa faa’iido waxaa uu munaafaqnimada kheyre kala dhex baxayaa midowga musharixiinta oo dhibaatadooda ay tahay iyagoo isku haya munaafiqiin laba lugootinaya oo habeenba meel ku hoyda iyo rag ay ka dhab tahay inuu dalkaan hagaago oo u diyaar ah inay dhiig iyo dhaqaalaba u huraan. Midowga murashxiinta waxaa laga rabaa inay yeelaan sida ay u dhaqmaan kooxaha dagaalka kula jira codow, kuwaas oo ka takhalusa munafiqiintooda, waa sida hadda ay ku dhaqmaan kooxaha ka soo so horjeeda Abiy oo xukunka maroorsaday waxay khaarijiyaan cidkasta oo iyaga ah daraja kasataa ha la haadee oo kooxda Abiy u gala. Waa inay iska saaraan midowga murashixiinta munaafiqiinta hoosta Farmajo kala jira oo shirarkooda soo fadhiista. MOL waxay idin la wadaagi doontaa caddeymo ay ku raad joogto oo ku saabsan rag maalintiina murashax, habeenkiina muxaafid dabadhilif ah.
Previous articleWafdi ka socda Somaliland oo ku sugan dalka Kenya
Next article[Buur Madow] Dowladda Shabab Dir baa madax ka ah. “Daawo”
Madaxweyne Farmaajo oo la sheegay inuu la kulmay Safiirka Itoobiya u...